Faili maneja; kuti chii, mabasa uye dzimwe nzira - VidaBytes | LifeBytes
Imwe yeiyo masisitimu anoshanda aripo nhasi, anoshanda kuburikidza neyakafanotsanangurwa faira sisitimu iyo yekushandisa nayo zvakasiyana-siyana zvirimo. Imwe yemabhenefiti makuru ayo Android inayo ndeyekuti ine yakanyanya kuchinjika kana zvasvika pakubhurawuza mafolda ekuchengetera. Iwe unongofanirwa kubatanidza nharembozha yako kune USB tambo uye izvi kuPC. Nenzira iyi iwe unogona kuronga uye kutamisa mafaera aunoda.
Mutsamba yauri kunyora izvozvi, isu tichabata nemusoro wekuti chii chinonzi faira maneja uye ndeapi akanakisa. Isu tichatarisa zvakanyanya pane zvese zvine chekuita nemidziyo yeAroid. Muzvizhinji zvezvishandiso zvedu zvefoni kana mahwendefa, maneja wefaira anowanzo kuverengerwa seyakajairwa, iyo yakaipa yeizvi ndeyekuti mazhinji acho anowanzo akanyanya kukosha uye ari nani anodiwa.
Kuti uwane kuita kwakanakisa kubva kune aya mafaera manejimendi masisitimu, vashandisi vanawo pavari vachave inobvumirwa kuchengetedza, kugadzirisa, kudzima kana kukopa mafaera ese anodiwa, pamwe nekukwanisa kuzviwana pasina dambudziko.
1 Chii chinonzi faira maneja?
2 Chii chinogona kuita maneja wefaira akabatanidzwa?
3 Kuipa kweiyo yakajairwa faira maneja
4 Best mafaira maneja
4.2 Google Mafaira
4.5 Wese Commander
Chii chinonzi faira maneja?
Mamaneja efaira eese ari maviri Android uye mamwe marudzi enharembozha ane zvakafanana shanda, gadzira mafaera akasiyana uye zvakare inobvumidza iwe kubata mafaera nenzira yakapusa zvatiinazvo mudura redu.
Pamakomputa, rudzi urwu rwemutungamiriri rwakatobatanidzwa, asi izvi hazviitike nemamwe nharembozha, mahwendefa, nezvimwe. Maneja wefaira haawanzouya nekukasira.
Kana nemukana, pane chako kifaa chinouya a faira system yakaburitswa, iwe uchave nemukana wekuishandura nekukurumidza uye ndezvekurodha uye nekuzoisa application yeichi chinangwa.
Chii chinogona kuita maneja wefaira akabatanidzwa?
Kuve neyakavanzika faira maneja pane yako Android mudziyo mukati mezvirongwa zvekushandisa zvinoratidza kuti kambani inoda kudzivirira vashandisi ava kuti vasangane nefaira system. Chimwe chezvikonzero zvikuru zvakakonzera chiyero ichi kuchengetedzwa, kubvira shanduko kune magadzirirwo emafaira akachengetwa anogona kukonzera mamwe mabasa kumira kushanda.
Kana iwe uchida kuiwana kubva pane chako kifaa, iwe uchafanirwa kuisa sarudzo yezvigadziriso, tsvaga uye sarudza "Memory uye USB", wobva wawana "Internal memory" uye pakupedzisira tinya "Ongorora". Kana uine vhura muongorori, iwe unozokwanisa kuona ese maforodha akachengetwa mukati memukati mendangariro yemudziyo wako.
Iwe unozove nemukana wekuchinja maonero egidhi, kurongedza nezita, zuva kana saizi uye unogona kutotsvaga kana watanga basa rakataurwa mune maneja. Kuti uwane zviri mukati memaforodha, unongofanidza kudzvanya pane chero ipi zvayo.
Sezvatakambotaura muchikamu chapfuura, nekuda kweakasiyana ekugadzirisa mabasa ane maneja wefaira, iwe unozogona kusarudza mafaera, kuadzima, kuakopa kune chero nzvimbo kana kugovana mune mamwe maapplication.
Kuipa kweiyo yakajairwa faira maneja
Mune inotevera runyorwa, iwe unowana dzakatevedzana dze mapoinzi asina kunaka ayo mamaneja mazhinji anogovana uye kuti zvingave zvakafanira kuvandudza ivo kuitira sangano riri nani uye maitiro emushandisi.
Standard mafaira mamaneja hauna basa rekucheka, kukwanisa kufambisa faira kubva kune imwe folda kuenda kune imwe, iyo chete inogoneka basa ndeyekukopa. Kana tichiita basa rekukopa, zvatiri kuita kudzokorora imwe faira nekuve naro kaviri, kamwe muforodha yekutanga, yatinofanira kudzima, uye imwe mune yakasarudzwa folda.
Chechipiri chisina simba chatinoona ndechekuti haugone kupa zita remaforodha kana mafaera, mazita akazara uye ekutanga anogara achiratidzwa, asi haabvumiri kuashandura kuti ave nemusiyano uri nani.
Kazhinji, hapana maforodha matsva anogona kugadzirwa kuitira kurongeka kuri nani yemafaira akachengetwa, unogona chete kushandisa maforodha akatogadzirwa.
Chekupedzisira, cherechedza kuti dai iine hurongwa hwekuchengeta mafaera akakwidzwa mugore, ingave muDropbox, Dhiraivha kana mamwe, manejimendi emafaira aya uye iwo emukati mendangariro yemudziyo kungave kufambira mberi kukuru.
Best mafaira maneja
Kuti tive nekukwanisa kugadzirisa faira yedu, tinokurudzira kuwana imwe nzira kune mutariri wepamusoro, iyo, sezvataona muchikamu chekare, inogona kupa mutsara wezvipingamupinyi. Muchikamu chino, tinopa a kusarudzwa kupfupi kwevamwe vanonyanya kukurudzirwa mafaera mamaneja.
Imwe yeanonyanya kufarirwa maapplication pakati pevashandisi, naani kukwanisa kuronga mafaera ese kubva mukati memukati mendangariro uye SD kadhi uye gore. Izvo zvachose zvemahara, uye zvakare nyore kwazvo kushandisa uye neakasiyana siyana emabasa.
Google faira maneja, ine yakapusa interface. Zvichakubvumira, gadzirisa izvo zvakachengetwa pamudziyo wako, asi iwe hauzoziva nzvimbo chaiyo yemafaira. Iwe unogona zvakare kusunungura nzvimbo nekudzima mafaera uye maapplication, maneja mafaera uye ugovane nemamwe maturusi.
Sezvinoratidzwa nezita racho, iyi application Iine mabasa ese aripo ekuibata akachengetwa nenzira yakanaka. Yakazara yemahara uye ine simba chishandiso chaunokwanisa kubata mafaera ako akaiswa kune gore.
Yechokwadi classic mune Android nharembozha, iyo nekufamba kwenguva yanga ichivandudza mabasa ayo uye dhizaini. Tinotenda kune aya mabasa atakataura nezvawo, iwe une mukana wekugadzira maforodha matsva kana mafaera. Pamusoro peizvi zvese uye nekugona kuzvibata, unogona kuwana mafaera akachengetwa mugore.
Kwete chete isu tinowana yayo desktop desktop, asi zvakare ine application yevashandisi veAndroid. Panyaya yezvishandiso zvekugadzirisa mafaera, ndiyo imwe yeakanakisa sarudzo. Iyo ine faira maneja mumahwindo maviri, akawanda-akasarudzwa, rename sarudzo, mabhukumaki, uye zvimwe zvakawanda.
Nezvishandiso izvi zvekutarisira, haungonatsiridze kurongeka kwemafaira ako, asi iwe uchave nekutonga kwakawanda pamusoro pekuti imwe neimwe yadzo iripi kuitira kuti iwe ugone kuaziva nekukurumidza nguva inotevera.
Isu tinogara tichikuudza zvinotevera uye nhasi zvaisazove zvishoma, kuti kana iwe uchifunga kuti unoziva chaiyo faira maneja wawakaedza uye wakakupa mhedzisiro yakanaka, usazeza kuisiya munzvimbo yekutaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Applications » File manager; chii, mabasa uye dzimwe nzira